Yakha Umhlaba Ongcono Nge-Paxful Alliance
Siyakwamukela ku-Paxful Alliance Masakhe umhlaba ongcono ndawonye
Yiba yingxenye yohlelo olukusiza wakhele emakhonweni akho futhi uthole abantu abanogqozi ababheka izinto njengawe ongabambisana nabo. Hlanganisa izinsiza zakho, xoxa ngombono wakho, sebenzani ndawonye futhi nenzele imiphakathi yenu izinto ezinhle.
Kungani kufanele ujoyine i-Paxful Alliance?
Sihlanganisa izinhlangano nabantu abavela kuzo zonke izizinda. Amabhizinisi, abantu kanye nezinhlangano ezingenzi nzuzo manje zingabambisana emigomweni nasemibonweni efanayo esiza imiphakathi yazo. Kuningi okuzuzwa ngalokhu kubambisana:
Yenza okuhle okwengeziwe
Thola abantu abacabanga njengawe futhi usize abantu abaningi ngokwenza umsebenzi womphakathi owushisekelayo onenjongo.
Tshela abantu abaningi
Bambisana neminkankaso yokusebenza nomphakathi ukuze utshele abantu abaningi kunanini ngaphambili ngomkhiqizo wakho.
Shumayela futhi ufundise
Yenza abantu bazi ngemikhiqizo yakho noma amabhizinisi ezindaweni ezintsha futhi uhambe phambili ekwenziweni kwenqubomgomo emayelana nomsebenzi wakho.
Ukubambisana ngokumelene nobunzima
Hlanganani ukuze nimelane nenincintisana nabo futhi nibashiye ngemuva. Ubunye bungamandla.
Landela imithetho yendawo
Thola usizo olufanele ukuze ibhizinisi lakho lilandele imithetho yasendaweni ezimaketheni ezintsha.
Yandisa izilaleli zakho
Yiya phesheya kwezilwandle, ngena ezimaketheni ezintsha futhi ufinyelele inani elikhulu labasebenzisi ababheka imikhiqizo yakho noma izinsiza.
#BuiltWithBitcoin — Ukubambisana okusiza umphakathi
I-Paxful yethule lomkhankaso wokusiza abaswele ngo-2017 ukubonisa ukuthi i-Bitcoin inamandla okusiza abantu emhlabeni jikelele. Lokhu kunikeza ubufakazi bokusebenziseka kwemali eyidijithali ngendlela engokoqobo okuqeda konke ukuqagela. Ngalokhu kubambisana, sikhuthaza umkhakha wemali eyidijithali ukuba ufake isandla kumaphrojekthi okusiza abantu.
I-Zam Zam Water
Izikhungo Ze-GROW Educare
Ngokubambisana ne-ZamZam Water, siphothule ukhwakhiwa kwenkulisa nesikole samabanga aphansi e-Kasebigege village, e-Rwanda. Ngaphezu kwalokho, ukwakhiwa kwesikhungo semfundo sezingane ezineminyaka engu-3 kuya kwengu-6 kuyaqhubeka e-Machakos County, e-Kenya.
Izincwadi zomtapo wezincwadi
Njengoba ukufunda kuyingxenye ebalulekile yohlelo lwe-Educare, umnikelo we-Paxful usetshenziselwe ukuthenga izincwadi zemitapo emincane ezikhungweni ezihlukahlukene. Umnikelo usize nasekuthumeleni ukudla ezinkulungwaneni zemindeni e-Western Cape nakwezinye izifundazwe ngesikhathi sobhubhane i-COVID-19.
Njengengxenye Yesikhwama Sase-Africa se #BuitWithBitcoin, i-Shining Hope for Communities yaqoqa obhasikidi bokudla abangu-333 abasiza abantu abangaphezu kuka-1500, izifonyo ezingu-6,000 zezisebenzi ezenza imisebenzi esemqoka, futhi yahambisa amanzi ahlanzekile eziteshini zokugeza izandla ezingu-60 e-Kibera inyanga yonke.
Thola Ongasebenzisana Nabo
Konke lokho kuzwakala kahle, kodwa awukaqiniseki ngokuthi yikuphi okungakulungela? Kungakhathaliseki ukuthi ukwezobuchwepheshe noma ukuxhasa abantu ngezimali, i-Paxful Alliane ingakulungela.
Siza ekufundiseni imiphakathi mayelana nokwakamuva okwenzeka ezimalini eziyidijithali noma kwezobuchwepheshe
Shintsha umhlaba wezezimali ngemibono yakho emisha futhi wakhe imikhiqizo emihle ezobumba ikusasa lemali.
Tshela umhlaba wonke umyalezo ofanele, usakazeke kakhulu kunanini ngaphambili
Imakethe yemali eyidijithali
Xazulula izinkinga ezihlukahlukene zemali eyidijithali, hlola izimakethe ezintsha namathuba
Yiba oholayo kwezemidlalo nezokuzijabulisa ezisekelwe emalini eyidijithali. Yenza yonke imibono yakho emihle yezemidlalo ibe ngokoqobo.
Noma yini enye ofuna ukubambisana kuyo. Ngeke wazi ukuthi ubani ongase ayithande imibono yakho!
Ukulungele ukungena? Masisebenze ndawonye